Nezvedu | Hebei Huasheng Felt Co, Ltd.
Kuvhara nharaunda ye11,000sqm uye tine 2 zvidyarwa, isu ikozvino kunyanya tinogadzira matatu mitundu yezvigadzirwa:
Imwe, Inaliti yakarodzwa yakanzwika, kusanganisira polyester yainzwa, mvere dzakanzwa, acrylic yakanzwa, viscose yakanzwa, kabhoni fiber yakanzwika, PP yainzwa, acoustic yakanzwika, murazvo kudzoka wakanzwa, mvura inodzoka yakanzwa, nezvimwewo.
Vaviri, Vakatsindirwa nemvere dzakasanganisika, kusanganisira vhudzi rakanzwika pepa, mvere dzakanzwika roll,
Zvitatu, Zvigadzirwa zvekutumira-kusanganisa, zvinosanganisira PVC yakanyorwa anti slip yakanzwa, singeing yakanzwa, yakadhindwa yakanzwa, yakanzwa bhegi, yakanzwa zvishongo, nezvimwe.
Kambani yedu yakarongedza michina yekugadzirwa kwepamberi sekuwirirana nedzimwe nyika
zviyero. Uye ine laser yekucheka, kupwanya, singeing, kudhiza uye mimwe michina yekugadzirisa. Midziyo yekuyeresa inoshandirwa nedhijitari yemagetsi, fiber yemagetsi inocherekedza, nezvimwe, izvo zvinovimbisa zvizere kuti zvigadzirwa zvinoenderana neEuropean Union pamwe neUnited States.
Kusvika pari zvino, kambani yedu yapfuura ISO9001 uye ISO14001 yepasi rose mhando uye masisitimu ezvekutarisirwa kwemamiriro ekunze. Uye zvigadzirwa zvese zvakapasa zvitupa zveEC, RACH, RoHS, nezvimwe naTUV, SGS.
Neakanakisa OEM / ODM kugona, kurira kwemhando, zvigadzirwa zvekugadzira, mutengo wemakwikwi uye basa rakavimbika, isu takakunda kurumbidzwa kweveruzhinji kwakanaka pakati pevatinofambidzana navo pasi rese. Kuti uwane rumwe ruzivo, taura nesu ikozvino.
Ratidziro & kushanya kwevatengi